Bit By Bit - su'aalo Waydiinta - 3.6.1 ballaaran
Weydiinta loo qoondeeyey, xogta baaritaanka waxay dhistaa xuruufta ilaha xogta weyn oo ay ku jiraan cabbiraadyo muhiim ah laakiin ka maqan kuwa kale.
Hal dariiqo oo lagu daro xogta sahanka iyo ilaha xogta waaweyn waa habka aan ku wici doono weydiinta balanta . Weydiinta la xoojiyey, ilaha xogta ee weyn waxaa ku jira cabbiraadyo muhiim ah laakiin wuxuu ka maqan yahay cabbiro kale sidaa daraadeed cilmi-baaruhu wuxuu ururiyaa cabbiraadaa maqnaanshaha sahan kadibna wuxuu isku xiraa labada ilaha macluumaadka. Mid ka mid ah tusaaleyaal balaadhan ayaa ah daraasadda ay samaysay Burke and Kraut (2014) ku saabsan haddii isdhexgalka Facebook uu kordhiyo xoogga saaxiibtinimo, oo aan ku qeexay cutubka 3.2). Xaaladdaas, Burke iyo Kraut isku-darka xog ururinta oo la socda xogta Facebook.
Hase yeeshee, Burke iyo Kraut oo ka shaqeynayey, waxay ahaayeen macnaheedu in aanay qasab ahayn inay wax ka qabtaan laba dhibaato oo waaweyn oo cilmi-baarayaashu sameeyaan si wax ku ool ah. Marka hore, dhab ahaantii isku xirka xogta shakhsi ahaaneed, nidaam la yiraahdo isku xirka diiwaangelinta , way adkaan kartaa haddii aaney jirin aqoonsi gaar ah labada ilo xog ah oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in diiwaanka saxda ah ee hal dataset la mid yahay diiwaanka saxda ah ee dataset kale. Dhibaatada labaad ee ugu weyn ee la weydiiyo waxa weeye in tayada ilaha xogta badani ay badanaa ku adkaan doonto cilmi-baadhayaasha si ay u qiimeeyaan sababtoo ah habka loo sameeyay xogta la abuuray waxay noqon kartaa mid munaasab ah waxayna noqon kartaa mid u nugul dhibaatooyinka badan ee lagu sharraxay cutubka 2aad. Si kale haddii loo dhigo, weydiinta siyaadada ah ayaa badanaa ku lug leh isku-xirka khaladka ah ee isku-dhafka ee sahammada illaha macluumaadka madow ee sanduuqa tayada aan la aqoon. Hase yeeshee, dhibaatooyinkaas, si kastaba ha ahaatee, weydiinta hodanka ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo cilmi-baaris muhiim ah, sida ay muujiyeen Stephen Ansolabehere iyo Eitan Hersh (2012) baadhitaankooda ku saabsan qaabka codbixinta ee Maraykanka.
Codbixiyeyaasha doorashada ayaa ahaa mawduuc cilmi-baaris ballaaran ee sayniska siyaasadeed, iyo, horay, cilmi-baarayaasha fahamka codadka iyo sababta ay guud ahaan ugu salaysantahay falanqaynta xogta sahanka. Codbixinta Mareykanka, si kastaba ha ahaatee, waa dabeecad aan caadi aheyn in xukuumaddu diiwaan geliso in muwaadin kasta uu u codeeyay (dabcan, xukuumaddu ma diiwaangelinayso muwaadin kasta oo codka bixinaya). Sannado badan, diiwaanka codbixinta dowladdan ayaa laga heli karaa waraaqo waraaqo ah, oo lagu kala qaybiyay xafiisyo dawladeed oo kala duwan oo ku yaalla dalka. Tani waxay ka dhigtay mid aad u adag, balse aan suurta gal ahayn, aqoonyahanada siyaasadda si ay u haystaan ​​sawir buuxa oo ku saabsan doorashada iyo in ay isbarbardhigaan waxa ay dadku ku yiraahdaan baaritaan ku saabsan codbixinta anshaxooda rasmiga ah (Ansolabehere and Hersh 2012) .
Hase yeeshee, diiwaanada codbixinta hadda waa la tiriyay, tiro shirkado gaar ah ayaa si nidaamsan loo soo ururiyey oo isugu daray iyaga si ay u soo saaraan faylasha cod bixinta oo dhammaystiran oo ay ku jiraan habdhaqanka codbixinta dhammaan dadka Maraykanka. Ansolabehere iyo Hersh waxay iskaashadaan mid ka mid ah shirkadahaan-Catalans LCC-si ay u isticmaalaan faylka codbixiyahooda sare si ay gacan uga geystaan ​​horumarinta sawir ka wanaagsan kuwa codbixiyayaasha. Dheeraad ah, sababta oo ah daraasaddooda waxay ku tiirsanayd diiwaanka digital-ka ah oo ay soo ururisay shirkad maalgelisa khayraad wax ku ool ah oo ku saabsan ururinta xogta iyo is-waafajinta, waxay bixisay dhowr faa'iidooyin oo ku saabsan dadaaladii hore ee la qabtay iyada oo aan la adeegsan shirkadaha iyo iyadoo la adeegsanayo diiwaanada analogga ah.
Sida qaar badan oo ka mid ah ilaha xogta ee cutubka 2, feylka macallinimada ee Catalans kuma jiraan macluumaad badan oo dadweynaha, dabeecadda, iyo akhlaaqda ansolabehere iyo Hersh. Xaqiiqdii, waxay si gaar ah u daneynayeen inay isbarbardhigaan dabeecadaha codbixinta ee la soo gudbiyay ee baaritaanyada anshaxa codbixinta ansaxsan (ie, macluumaadka ku jira xogta Catalans). Sidaas darteed, Ansolabehere iyo Hersh waxay soo uruuriyeen xogta ay doonayaan inay noqdaan sahan bulsheed oo ballaadhan, CCES, oo lagu xusay cutubkan. Kadibna waxay xogtooda ku siiyeen Catalist, oo Catalans waxay dib u soo celiyeen faylka xogta la isku daray oo ay ku jiraan habdhaqanka cod-bixinta ee saxda ah (laga soo qaatay Catalist), habdhaqanka cod-bixinta ee is-dhiibay (CCES) iyo qaabka iyo qaababka dadka jawaabaha bixiyey (CCES) 3.13). Si kale haddii loo dhigo, Ansolabehere iyo Hersh waxay isku dhafan yihiin xogta diiwaanka codbixinta iyadoo la adeegsanayo xogta sahanka si ay u sameeyaan cilmi baaris aan suurtagal ahayn iyada oo labada dhinacba si isdabajoog ah u helayaan.
Jaantus 3.13: Ansolabehere and Hersh (2012) daraasaddan oo ay sameeyeen Ansolabehere and Hersh (2012) . Si loo abuuro xogta macmiilka, Catalans waxay isku daraysaa oo waxay iswaafajisaa macluumaadka ilaha kala duwan. Nidaamkan mideynta, iyada oo aan loo eegin sida taxaddar leh, waxay ku faafin doontaa khaladaadka ilaha xogta asalka ah waxayna soo saari doonaan khaladaad cusub. Ilaha labaad ee khaladaadka waa isku xidhka diiwaangelinta ee u dhaxeeya xogta sahanka iyo xogta sayniska. Haddii qof kasto uu leeyahay aqoonsi xasillooni ah, oo u gaar ah labada ilaha xogta, ka dibna isku xirnaantu waxay noqon laheyd mid fudud. Laakiin, Catalans waa inay sameeyaan iskuduwaha iyagoo adeegsanaya aqoonsi aan dhammaystirneyn, marka loo eego magaca, jinsiga, sannadka dhalashada, iyo cinwaanka guriga. Nasiib darro, kiisaska badanaa waxaa jiri kara macluumaad dhameystiran ama aan sax ahayn; codbixiye la yiraahdo Homer Simpson waxaa laga yaabaa inuu u muuqdo Homer Jay Simpson, Homie J Simpson, ama xitaa Homer Sampsin. Inkasta oo ay suurtagal tahay in qaladaad lagu sameeyo macallinka caanka ah ee Catalans iyo qaladaadka isku xirka rikoodhka, Ansolabehere iyo Hersh waxay awood u yeesheen inay ku dhistaan ​​kalsooni qiyaasoodkooda iyada oo loo marayo dhawr nooc oo kala duwan.
Iyadoo faylka xogta la isku daray, Ansolabehere iyo Hersh waxay u yimaadeen saddex gabagabeed oo muhiim ah. Ugu horreyn, cod bixin ka badan oo ku saabsan cod bixinta waa mid aad u ballaaran: ku dhawaad ​​kala badh dadka cod bixiyayaasha ah ayaa sheegay inay codeynayaan, iyo haddii qof uu soo sheegey cod-bixinta, waxaa jira kaliya 80% fursad ah oo ay u codeeyeen. Marka labaad, warbixinta ka badani ma ahan mid kala duwan: Warbixin dheeraad ah ayaa ka badan kuwa dakhligoodu sarreeyo, kuwa aqoonta leh, kuwa qaybta ka ah arrimaha ku lug leh arrimaha bulshada. Si kale haddii loo dhigo, dadka ay u badan tahay inay codeeyaan waxay sidoo kale u badan tahay inay been ka sheegaan codbixinta. Saddexaad, iyo ugu kalsoonaanta, sababtoo ah dabeecadda nidaamsan ee warbixinta ka badan, khilaafaadka dhabta ah ee udhaxeeya codbixiyayaasha iyo kuwa aan xuduudaha ahayn way ka yar yihiin marka laga eego kaliya baaritaannada. Tusaale ahaan, kuwa haysta shahaadada bachelor-ka waxay ku dhawaad ​​22 boqolkiiba dhibcaha ka badan tahay inay soo sheegaan cod bixinta, laakiin waxay 10% dhibcood oo keliya ay u badan tahay inay si dhab ah u codeeyaan. Waxaa soo baxday, laga yaabo in aan la yaabin, in fikradaha jira ee ku salaysan khayraadka ay aad u fiican yihiin saadaalinta qofka sheegi doona codbixinta (taas oo ah xogta ay cilmi-baarayaashu hore u isticmaaleen) marka loo eego kuwa dhab ahaantii codkooda dhiibanaya. Sidaa daraadeed, raadinta awooda Ansolabehere and Hersh (2012) baaqeysaa aragtiyo cusub si ay u fahmaan iyo saadaalinta cod bixinta.
Laakiin intee in le'eg ayaan ku kalsoon nahay natiijooyinkan? Xusuusnow, natiijooyinkaan waxay ku xiran yihiin qalad ujeeda oo isku xira xogta madow ee leh qadar aan la ogeyn. Taas si gaar ah, natiijooyinka waxay ku salaysan yihiin laba talaabo oo muhiim ah: (1) kartida Catalist si ay isugu keenaan ilo xogeed oo badan oo kala duwan si loo soo saaro xogta saxda ah ee saxda ah iyo (2) kartida Catalist si ay xogta sahanka ugu xirto xogta sayniska. Tallaabooyinkan mid kasta waa ay adag tahay, iyo khaladaadka labada tallaabo ah waxay u horseedi karaan cilmi baarayaasha in ay khaldan yihiin. Si kastaba ha noqotee, labadaba macluumaadka iyo xiriirinta labadaba waxay muhiim u yihiin joogitaanka shirkada Catalist-ka ah ee shirkad, sidaas darteed waxay maalgelin kartaa khayraadka xallinta dhibaatooyinkaas, inta badan miisaankoodu uusan cilmi-baaristu ku haboonayn. Warqaddooda, Ansolabehere iyo Hersh waxay soo mareen dhowr tallaabo oo ay ku hubiyaan natiijooyinka labada tallaabo-inkastoo qaar ka mid ah ay yihiin kuwa macaamiisha ah-iyo jeegagahan ayaa caawin kara cilmi-baadhayaasha kale ee raba in ay isku xiraan macluumaadka sahanka ee xogta madow ilaha
Maxay yihiin cilmi-baarayaasha guud ee casharada daraasaddan? Ugu horreyn, waxaa jira qiimo aad u sarreeya oo lagu kobcinayo ilaha xogta weyn ee xogta la socota iyo xogta xog ururinta xogta sahlan oo leh ilo xogeedyo waaweyn (waxaad arki kartaa daraasaddan habka). Isku darka labadan xog ee cilmi-baadhista, cilmi-baarayaashu waxay awoodeen inay sameeyaan wax aan suurtagal ahayn labada qofba. Casharka labaad ee guud waa inkasta oo ilaha xogta, sida macluumaadka ganacsiga, sida xogta laga soo qaato Catalist, waa in aan loo tixgelin "runta dhabta ah", mararka qaarkood, waxay noqon karaan kuwo faa'iido leh. Skeptics mararka qaarkood waxay isbarbardhigaan kuwan xogta la ururiyey, ganacsiga ganacsiga oo leh xaqiiqo xaqiiq ah oo tilmaamaya in ilaha xogtaasi ay gaaban yihiin. Si kastaba ha noqotee, xaaladdan, shakiga ayaa ka dhigaya isbarbardhigga khaldan: dhammaan xogta ay cilmi-baarayaashu isticmaalaan gaabiska runta ah. Taa beddelkeeda, way ka fiican tahay in la isbarbardhigo ilaha xogta la ururiyey, ilaha macluumaadka kale ee la heli karo (tusaale ahaan, habdhaqanka cod-bixinta ee is-sheegta), taas oo qalad u leh khaladka sidoo kale. Ugu dambeyntii, casharka saddexaad ee cilmibaadhista Ansolabehere iyo Hersh ayaa ah, xaaladaha qaarkood, cilmi baarayaashu waxay ka faa'iideysan karaan maalgashiga weyn ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ay samaynayaan ururinta iyo isudheellidda qaababka xogta bulshada ee adag.